Alexander Pope. Isikhumbuzo sokuzalwa kwakhe. Izingcezu zemisebenzi yakhe | Izincwadi Zamanje
Isithombe sika-Alexandre Pope eNational Portrait Gallery eLondon. NguMikael Dahl.
Alexander Pope wazalwa ngosuku olufana nanamuhla London. Umbhali, i-eseyi kanye nomhumushi, kubhekwa njenge- imbongi ebaluleke kakhulu yekhulu le-XNUMX IsiNgisi. Wayephila ngesikhathi esifanayo futhi engumngane wababhali abanjengoJonathan Swift. Phakathi kwemisebenzi yakhe eyaziwa kakhulu kukhona eyakhe Izingoma zokwalusa. Lesi yisifushane Ukukhethwa kwamazwibela wabo.
2 Ezinye izingcezu zemisebenzi yakhe
2.1 Ukusuka ku-Eloísa kuye ku-Abelardo (ekuqaleni)
2.2 Elegy enkumbulweni yowesifazane (isiqeshana)
2.3 Isigaxa se-Stolen Curl
Wazalelwa 1688, waqala ukubhala izinkondlo ngeyakhe ebuntwaneni. Okwabo Izingoma zokwalusa, eyanyatheliswa ngo-1709, kwakungeyakhe i-premiere esemthethweni ezincwadini. Usuvele wahlonishwa njengombhali, waqhubeka nemisebenzi efana ne- Elegy enkumbulweni yowesifazane, uHeloise waya e-Abelard, I-curl eyebiwe o I-eseyi kumuntu. Kuhunyushiwe I-Iliad y I-odyssey futhi wayengumbhali we U-Isaac Newton epitaph.
Ethintwe ngu sofuba kanye ne- a ukungalungi komzimba lokho kuphawule impilo yakhe, wayefuna ukukwenza ngokuningi ithalente, wit nomuzwa omkhulu wobungani. Abangani bakhe bahlanganisa noJohn Gay futhi UJonathan Swift, adale naye lo mbuthano Iklabhu yeScriblerus eLondon.
Ezinye izingcezu zemisebenzi yakhe
Kusuka ku-Eloísa kuya ku-Abelardo (Qala)
Kusuka kulawa maseli amabi nokuhlala wedwa okujulile
lapho ukucabanga kwasezulwini kuhlala khona,
lapho kubusa ukucasuka kwangempela,
Ngabe ukuvezwa kwemithambo ye-vestal kuveza ini?
Kungani imicabango yami ibalekela lokhu kubaleka?
Kungani umlilo ocashile uvutha enhliziyweni yami?
iphutha ngu-Abelardo, uma ngisathanda,
futhi kufanele aqabule igama lakhe, namanje, Heloise.
Igama elibulalayo nelithandekayo! imfihlo isala
yalezi zindebe ezivalwe ngokuthululwa okungcwele;
inhliziyo yami, ukufihle kungukuzifihla okusondelene nayo,
lapho kuhlanganiswe noNkulunkulu umbono wakhe othandekayo ulele;
igama lenziwa labonakala -ah, ungabhali, isandla sami-;
okugcwele sekuvele kwazisiwe - izinyembezi zami zisule! -
UHeloise ulahlekile, akunalutho ukuthi ngiyakhala futhi ngithandaze,
inhliziyo yakhe isasho, futhi isandla sakhe siyalalela.
Elegy enkumbulweni yentokazi (isiqeshana)
Awu muhle njalo, unomusa njalo, ngitshele
Ngabe ukuthanda kahle kakhulu, ezulwini, kuyicala?
Ukuba nenhliziyo ethambile kakhulu, noma ukuqina ngokweqile?
Udlale indima yomRoma noma yesithandwa?
Ngabe akukho ezulwini ukubuyiselwa okuhle
kulabo abanomcabango omuhle noma wokufa ngesibindi?
I-curl eyebiwe (isiqeshana)
Le nymph, eyakhelwe incithakalo
Ebuntwini bethu, yondla
Ama-curls amabili, lawo anomusa we-pilgrim
Umhlobiso omuhle ubolekisiwe
Kubuyela emuva eqhweni ezicijile ezinhle;
Inethi neketanga enhliziyweni enothando;
Futhi uma ukubona kwenzeka ngaso sonke isikhathi
Ngomane omncane ukukhanyisa izinyoni: Futhi, wena, uhlanga lwasebukhosini lomuntu, ungadumisi;
Ukuthi uboshwe ngegolide umbopha,
Futhi i-blazon enhle,
Uyini amandla akhe amakhulu amafushane,
Indoda ishayela ngezinwele.
Ama-curls ajabule umuntu ojabulayo,
Bukela futhi uthule, futhi impango iyamunya;
Futhi ngizimisele ukuwina, izindlela ziyavuleka
Ngaphandle kokukhohlwa ubuqili bobuqili noma ubuhlanya;
Futhi kudala ngaphambi kukaPhoebus umhlaba ugcwala,
Inhliziyo yakhe imyala ukuba ancenge
Ezulwini elinomusa, futhi ekhonza kakhulu
inhlonipho incenga uthando.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Alexander Pope. Isikhumbuzo sokuzalwa kwakhe. Izingcezu zemisebenzi yakhe
Izincwadi zikaJulia Navarro